မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံး ရေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘန့်ဘွေးကျင်းရေတံခွန်ကြီး - Thutazone
By ThutammPosted on November 22, 2018
ရေးသားသူ – ကိုနေထွန်းဦး
ပြင်ဦးလွင်/နောင်ချို/မတ္တရာမြို့နယ် သုံးမြို့နယ် ဆုံရာ ဆည်တော်ကြီးရေပြင်အနီး တောင်ကမ်းပါးယံထက်မှာ သဘာဝအတိုင်း အံ့မခန်းဖြစ်တည်နေတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝ ပန်းချီကား ချပ်ကြီးတစ်ချပ်အလား ထင်မှတ်ရတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးတစ်စင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသအခေါ် ရှမ်းဘာသာ စကားနဲ့ နမ့်တန်း ရေတံခွန်ဟုခေါ်ဆိုပါတယ်။ မောင်နှံခုနစ်ဖော်ရေတံခွန်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုပြီး တစ်ချို့က ဘန့်ဘွေးချင်း ရေတံခွန်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Angel Fall တစ်စင်းပါဘဲ။ Table top တောင်မျက်နှာပြင်တစ်ညီထဲကနေ တစ်ဖြောင့်ထဲ တစ်ရှိန်ထိုး အလုံးလိုက် ထိုးဆင်းပြီး တစ်နေရာအရောက်မှာ ရေလုံးကြီးဟာ ဖြာပြီးအစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်း ကွဲထွက်သွားပုံက အဖြူရောင်သတို့သမီး ဂါဝန် ဝတ်ဆင်ထားသလားတောင် ထင်မှတ်ရအောင် အံ့သြမှင်သက် လှပ ပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင်နဲ့ မိုင် ၃၀ ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး ဆည်တော်ကြီးရဲ့ အရှေ့ဖက် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် ဘန့်ဘွေးကျင်း ကျေးရွာ ကိုင်းကြီး သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းထဲမှာ တည်ရှိပြီး နောင်ချိုမြို့နယ် နမ့်ပါ့မွန် ချောင်းမှ စီးဆင်းလာတဲ့ရေများဖြစ်ပြီး ဘန့်ဘွေးကျင်းရွာအနီးမှာ ရေတံခွန်ကြီးဖြစ်တည်နေပါတယ်။ ရေတံခွန်က ဆင်းတဲ့ရေများဟာ ဆည်တော်ကြီး ဖက်သို့စီးဝင်သွားပါတယ်။
မြောက်လတ္တီကျူ့ 22° 24´ 29″ ? အရှေ့လောင်ဂျီကျူ့ 96° 22´ 48″ မှာတည်ရှိပါတယ်။ ရေတံခွန်စတင်စီးဆင်းတဲ့ ထိပ်ဆုံးအမြင့်ပေသည် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ၂၄၈၆ ပေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတံခွန်ထိပ်ပိုင်းရဲ့ ရေစီးကြောင်းသည် table top တောင်မျက်နှာပြင် တစ်ညီထဲကနေ 90° မျဉ်းမတ်ဖြင့် တစ်ရှိန်ထိုး တစ်ဖြောင့်ထဲ ပေ ၅၅၀ ခန့် ထိုးဆင်းပြီး တစ်နေရာအရောက်မှာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြန့်ကျဲသွားပါတယ်။ ထိုနေရာမှ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် နိမ့်ဆင်းသွားပြီး ရေတံခွန်အဆင့် ၇၀ နီးပါးလောက်အထိ ရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် မိုးကြိုးပြစ်ကျေးရွာမှ တစ်ဆင့် လမ်းခွဲသွားပြီး ပြင်ဦးလွင်~မိုးကုတ် လမ်းပိုင်း ၂၃ မိုင် ၅ ဖာလုံ မှ တစ်ဆင့် လွယ်လိတ်ရွာ သို့ ဝင်သွားရပါတယ်။ လွယ်လိတ် လမ်းခွဲအတိုင်း ဝင်လာရင် ၁ မိုင် အကျော်မှာ လွယ်လိတ်ရွာသို့ ရောက်ပါတယ်။ လွယ်လိတ်ရွာ မှ တစ်ဆင့် ၃ မိုင် ၅ ဖာလုံ အကွာမှာ သပြေဒိုးရွာ သို့ရောက်ရှိပါတယ်။ သပြေဒိုးရွာမှတစ်ဆင့် ၂ မိုင်အကွာမှာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း သို့ရောက်ရှိပါတယ်။ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းရဲ့ ၁ မိုင်ခွဲ အကွာ မှာ ရေတံခွန်တည်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရေတံခွန်အောက်ဖက်သို့ ပထမအကြိမ် (၃.၉.၂၀၁၇) နေ့မှာ အဖွဲ့ဝင် အင်အား ၁၅ ယောက်ပါဝင်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆင်းခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ရေတံခွန် ထိပ်ကနေ အောက်ကိုဆင်းတဲ့ အဖွဲ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးအဖွဲ့ ဘဲလို့သိခဲ့ရလို့ အားတက်ခဲ့မိပါတယ်။ (၂၂.၉.၂၀၁၇) နေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အဖွဲ့ဝင် အင်အား ၇ ယောက်ပါဝင်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ အရမ်းကျေနပ်အားရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ၉ ယောက် ပြင်ဦးလွင်မှ မနက် ၁၀ နာရီမှာ ကားနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီ အကျော်မှာ သပြေဒိုးရွာ သို့ရောက်ရှိပါတယ်။ သပြေဒိုးရွာမှာ ထမင်းစားနားခဲ့ကြပြီး နေ့လည် ၁ နာရီအကျော်မှာ သပြေဒိုးရွာမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ၂ နာရီဝန်းကျင်းမှာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ရောက်ရှိပါတယ်။ ထိုနေရာသည် အကောင်းဆုံး view တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်စွယ် တောင်တန်းတွေကြားမှာ ဆည်တော်ကြီးကန်ရေပြင်ကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပြီး မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာ ပန်းချီကားချပ်ကြီးအလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် လှပပါတယ်။ အဝေးဆီက မိုးထိတောင် ရဲ့အလှအပတွေကိုလည်း အတိုင်းသားတွေ့နေရပြီး မိုးထိတောင်ဆိုသည့်အတိုင်း တောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးထိပ်ပိုင်းဟာ တိမ်တွေနဲ့တစ်ဆက်ထဲ ဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတော့ အရမ်းအံ့သြမှင်သက်စေခဲ့ပါတယ်။
ယခုနေရာအထိက ကျောက်လမ်းမ ဖြစ်သည့်အတွက် ကား အဝင်အထွက် အဆင်ပြေခဲ့ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ ရေတံခွန် သို့သွားမယ် တစ်မိုင်ခွဲခန့်သည် လမ်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက် ကားကို အနားက အိမ်ဆိုင်လေးမှာဘဲ အပ်ထားခဲ့ပြီး Trekking စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင် မှာ ရေတံခွန်ရဲ့ အပေါ်ဖက် view ဆီသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရေတံခွန်ကို မြင်လိုက်ရတော့ မအံ့သြဘဲကိုမနေနိုင်ပါ။ ရေအရမ်းများနေပြီး ရထားတစ်စင်း ခုတ်မောင်းနေသလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် တဂျုံးဂျုံးအသံတွေထွက်ပေါ်နေပြီး ရေတွေကျနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ရင် မူးသွားလောက်အောင်အထိ ချောက်အနက်ကြီးထဲ ရေတွေထိုးကျနေပါတယ်။ ချောက်ကမ်းပါးယံက ဘာအကာအရံမှမရှိ လူတစ်ကိုယ်စာ လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ ရိုက်တဲ့သူများ သတိ ကြီးကြီးထားပြီး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရေတံခွန် ထိပ်တည့်တည့် ကရေစီးကြောင်းအထိ အနီးကပ် လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ရေတံခွန် အောက်ဖက်သို့ ဆင်းရန် ပထမအကြိမ်က ရေတံခွန်ရဲ့မြောက်ဖက်ကနေ ဆင်းပြီး တောင်ဖက်ကနေ အပေါ်ကို ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ဖက်လမ်းရဲ့ အနေအထားဟာ လမ်းကြောရှည်လျားပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့်အနေအထားမျိုးတွေ သိပ်မတွေ့ရဘဲ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ လမ်းကြောဟာ အရမ်း ရှည်လျားတဲ့အတွက် အဆင်းမှာ ဘဲ အချိန် ၂ နာရီခွဲ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဖက်ကနေ ပြန်တက်တဲ့လမ်းဟာ တိုတောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းမတ်စောက်ပြီး အန္တရာယ် အလွန်ကြီးမားပါတယ်။ ချောက်နက်ကြီးရဲ့ တောင်ကမ်းပါးယံတွေထက်မှာ လူတစ်ကိုယ်စာလမ်းလေးတွေကနေ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်။
စွန့်စားခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ သွားသင့်တဲ့ လမ်းပါ။ ယခုတောင်ဖက်လမ်းက တောင်တက် တောလမ်း အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား လူတွေအတွက်ဘဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ ခြေအချမတော်ရင် သက်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့ ကျောက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်တွေ ပဲ့ကျပြီး လူပါချောက်ထဲပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ယခု ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တောင်တက်လမ်းတိုတောင်းတဲ့ ရေတံခွန်တောင်ဖက်ခြမ်းကနေဘဲ အတက်အဆင်း ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဆင်းတဲ့လူ ၇ နှစ်ယောက်လုံးက တောင်တက်အတွေ့အကြုံတွေရှိထားပြီး လမ်းကြောင်းအနေအထားတွေ နားလည်ထားပြီးသား လူတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ သာသာယာယာပါဘဲ။ အခက်အခဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ မိန်းကလေးမပါဘဲ ယောက်ကျားလေးတွေချည်းဘဲ ဖြစ်တာနဲ့ ဇွဲလုံ့လ ဝရီယအားစိုက်ထုတ်ပြီး အရမ်းကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် ရေတံခွန်ထိပ်ကနေ အောက်ဖက်သို့အဆင်းမှာ ကြာမြင့်ချိန် ၄၈ မိနစ် ဘဲကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အတက်လမ်းကိုလည်း ယခုလမ်းကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး ပြန်တက်ခဲ့ရာ ကြာမြင့်ချိန် ၅၀ မီနစ် မှာ အပေါ်သို့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်မှာ ရေတံခွန်ထိပ်ကနေ တောင် စဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ချောက်ကမ်းပါးယံထက်က သက်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့ ကျောက်နုလေးတွေကနင်းပြီး လူတစ်ကိုယ်စာ ခြေချစရာလမ်းလေးတွေကနေ ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိရင်တော့ အတက်အဆင်းပြုလုပ်ဖို့ လုံးဝမလွယ်ကူပါ။
တောင်ဆင်းလမ်းမှာ သဘာဝကျောက်ဂူများ ကျောက်စက်မိုးမျှော်များ ကျောက်စက်ရေများ အရမ်းလှပတဲ့ ဆည်တော်ကြီးကန်ရေပြင်နဲ့ သဘာဝတရားဟာ အလွန်လှပပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရေတံခွန်အခြေအောက်တော်တော်နက်တဲ့အထိ ရောက်သွားခဲ့ပြီး အရစ်ရစ်အထပ်အထပ်တွေနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ ပင်ပန်းသမျှအမောပြေ ခဲ့ရပါတယ်။ ရေစီးလည်း အရမ်းသန်နေပြီး တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့် ပုံစံမတူ ကွဲပြားပြီး ရသမျိုးစုံ ပေးစွမ်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပြီး ရေတံခွန် အပေါ်ဆင့် တွေဆီ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တက်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီ တိတိ မှာ ရေတံခွန် အောက်ခြေရဲ့ အကောင်းဆုံး view တစ်ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီး ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ ရေတံခွန်မြင်ကွင်းကြောင့် သတိလွတ်သွားပြီး အသကုန် အော်ထည့်လိုက်တာ လူပါချော်ကျကာ ဖုန်းပါကွဲသွားခဲ့တာ အမှတ်တရတစ်ခုပါဘဲ။ တကယ်ကိုလှတာဗျာ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်တောင် အိမ်မက်မက်နေသလားတောင် ထင်မှတ်ရပါတယ်။
ပထမအကြိမ်ဆင်းတုန်းက ယခုနေရာကို မရောက်ခဲ့ပါ။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ အလှဟာ အရမ်းဆန်းကြယ်လွန်းပါတယ်။ ဒီလောက်လှနေတဲ့ သဘာဝအလှတွေနဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့ခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိုနေရာမှာ စတင်ထွက်ခွာပြီး တောင်ပေါ်သို့ပြန်တက်ချိန်မှာ မိုးချုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။ အမှောင်ထဲမှာ ဓာတ်မီးတွေထိုးပြီး အထူးဂရုစိုက် သတိ ကြီးစွာနဲ့ တောင်ပြတ်တက်ခဲ့ရာ ည ၇ နာရီကျော်မှာ တောင်ပေါ်သို့ ပြန်ရောက်ပါတယ်။
ရေတံခွန်တောင်ထိပ်က view point နားမှာ နားကြ ညစာခေါက်ဆွဲပြုတ်စားကြ အနားယူပြီး ည ၈ နာရီ ဝန်းကျင်မှာ view point ကနေ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအထိ trekking ပြန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှောင်ထုဟာ ကြီးစိုးနေပြီး လျှပ်စီးရောင်တွေတလက်လက်နဲ့ ကြယ်တွေထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ ညတစ်ည ပြောင်းဖူးခင်းတွေကြားမှာ သဘာဝရေစီးကြောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီး အမှောင်ထဲက လက်နေတဲ့ ဆည်တော်ကြီးရေပြင်ကို ငေးမောပြီး တောတွင်း လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ညတစ်ညဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး ညတစ်ညပါဘဲ။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွတ်လပ်မူရဲ့ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားရတဲ့ စိတ်ခံစားမူဟာ ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရပါ။ ကျွန်တော်တို့ ည ၉ နာရီဝန်းကျင်မှာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကားထားခဲ့တဲ့ နေရာကို ရောက်ရှိပါတယ်။ ထိုနေရာမှာ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ည ၁၁ နာရီကျော်မှာ မေမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ ရေခဲတောင် တောင်တက်သမား ကိုမိုးမင်းသိန်း(ပူတာအို) / ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပိန္နဲကုန်းရွာ ဥက္ကဌ လေးလေး ဦးဇော်ဝင်း / region conductor ကိုငြိမ်းမောင် / ခရီးသွားလမ်းညွှန်မှ ကိုရန်နိုင်မိုး / မေမြို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေသည့် ကိုကျော်ဝေဦး / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလေ့လာနေသည့် ကို အကြီးကောင် / သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကိုကျော်သူရထွန်း / စွန့်စားခရီးသွား ဝါသနာရှင် ကိုထူးထူးလင်း နှင့် သဘာဝရဲ့ဖြစ်တည်မူတွေကို အထူးတန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးပြီး အနီးကပ်လေ့လာရှာဖွေနေတဲ့ ကျွန်တော် နေထွန်းဦးတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တောအနေအထားသည် မိုးအခါမှာ တောဆင်းရိုင်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။ နွေအခါမှာ တောဝက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက်က ဝံ တတ်လာသည်ဟု ဒေသခံတွေဆီက သိခဲ့ရပါတယ်။
ယခု ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာ လိုအပ်ချက် တစ်ခုလိုနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြရန် ကျွန်တော်အခြေခံကျကျ ထိနားလည်တတ်ကျွမ်းထားမူ မရှိတဲ့အတွက် ထိန်ချန်ထားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ရေးသားချက် အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပါသွားမှာ စိုးထိတ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရှင်းပြတော့ပါ။ အညိုရောင်နယ်မြေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ (အခုဆိုရင်တော့ တော်တော်များများ သွားနေကြတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါပြီ)
VIDEO (The Burmese Nomad)
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အလှဆုံး ရတေံခှနျတဈခုဖွဈတဲ့ ဘနျ့ဘှေးကငျြးရတေံခှနျကွီး (unicode)
ရေးသားသူ – ကိုနထှေနျးဦး
ပွငျဦးလှငျ/နောငျခြို/မတ်တရာမွို့နယျ သုံးမွို့နယျ ဆုံရာ ဆညျတျောကွီးရပွေငျအနီး တောငျကမျးပါးယံထကျမှာ သဘာဝအတိုငျး အံ့မခနျးဖွဈတညျနတေဲ့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ သဘာဝ ပနျးခြီကား ခပျြကွီးတဈခပျြအလား ထငျမှတျရတဲ့ ရတေံခှနျကွီးတဈစငျးဘဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒသေအချေါ ရှမျးဘာသာ စကားနဲ့ နမျ့တနျး ရတေံခှနျဟုချေါဆိုပါတယျ။ မောငျနှံခုနဈဖျောရတေံခှနျဟုလညျး ချေါဆိုပွီး တဈခြို့က ဘနျ့ဘှေးခငျြး ရတေံခှနျဟုလညျး ချေါဆိုပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Angel Fall တဈစငျးပါဘဲ။ Table top တောငျမကျြနှာပွငျတဈညီထဲကနေ တဈဖွောငျ့ထဲ တဈရှိနျထိုး အလုံးလိုကျ ထိုးဆငျးပွီး တဈနရောအရောကျမှာ ရလေုံးကွီးဟာ ဖွာပွီးအစိတျစိတျအပိုငျးပိုငျး ကှဲထှကျသှားပုံက အဖွူရောငျသတို့သမီး ဂါဝနျ ဝတျဆငျထားသလားတောငျ ထငျမှတျရအောငျ အံ့ဩမှငျသကျ လှပ ပါတယျ။
ပွငျဦးလှငျနဲ့ မိုငျ ၃၀ ခနျ့သာ ကှာဝေးပွီး ဆညျတျောကွီးရဲ့ အရှဖေ့ကျ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး နောငျခြိုမွို့နယျ ဘနျ့ဘှေးကငျြး ကြေးရှာ ကိုငျးကွီး သဈတောကွိုးဝိုငျးအတှငျးထဲမှာ တညျရှိပွီး နောငျခြိုမွို့နယျ နမျ့ပါ့မှနျ ခြောငျးမှ စီးဆငျးလာတဲ့ရမြေားဖွဈပွီး ဘနျ့ဘှေးကငျြးရှာအနီးမှာ ရတေံခှနျကွီးဖွဈတညျနပေါတယျ။ ရတေံခှနျက ဆငျးတဲ့ရမြေားဟာ ဆညျတျောကွီး ဖကျသို့စီးဝငျသှားပါတယျ။
မွောကျလတ်တီကြူ့ 22° 24´ 29″ ? အရှလေ့ောငျဂြီကြူ့ 96° 22´ 48″ မှာတညျရှိပါတယျ။ ရတေံခှနျစတငျစီးဆငျးတဲ့ ထိပျဆုံးအမွငျ့ပသေညျ ပငျလယျရေ မကျြနှာပွငျအထကျ ၂၄၈၆ ပေ ဖွဈပါတယျ။ ရတေံခှနျထိပျပိုငျးရဲ့ ရစေီးကွောငျးသညျ table top တောငျမကျြနှာပွငျ တဈညီထဲကနေ 90° မဉျြးမတျဖွငျ့ တဈရှိနျထိုး တဈဖွောငျ့ထဲ ပေ ၅၅၀ ခနျ့ ထိုးဆငျးပွီး တဈနရောအရောကျမှာ အစိတျစိတျအမှာမှာ ပွနျ့ကြဲသှားပါတယျ။ ထိုနရောမှ တဈဆငျ့ပွီး တဈဆငျ့ နိမျ့ဆငျးသှားပွီး ရတေံခှနျအဆငျ့ ၇၀ နီးပါးလောကျအထိ ရှိနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ မိုးကွိုးပွဈကြေးရှာမှ တဈဆငျ့ လမျးခှဲသှားပွီး ပွငျဦးလှငျ~မိုးကုတျ လမျးပိုငျး ၂၃ မိုငျ ၅ ဖာလုံ မှ တဈဆငျ့ လှယျလိတျရှာ သို့ ဝငျသှားရပါတယျ။ လှယျလိတျ လမျးခှဲအတိုငျး ဝငျလာရငျ ၁ မိုငျ အကြျောမှာ လှယျလိတျရှာသို့ ရောကျပါတယျ။ လှယျလိတျရှာ မှ တဈဆငျ့ ၃ မိုငျ ၅ ဖာလုံ အကှာမှာ သပွဒေိုးရှာ သို့ရောကျရှိပါတယျ။ သပွဒေိုးရှာမှတဈဆငျ့ ၂ မိုငျအကှာမှာ ရအေားလြှပျစဈစီမံကိနျး သို့ရောကျရှိပါတယျ။ ရအေားလြှပျစဈစီမံကိနျးရဲ့ ၁ မိုငျခှဲ အကှာ မှာ ရတေံခှနျတညျရှိပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ရတေံခှနျအောကျဖကျသို့ ပထမအကွိမျ (၃.၉.၂၀၁၇) နမှေ့ာ အဖှဲ့ဝငျ အငျအား ၁၅ ယောကျပါဝငျပွီး အောငျမွငျစှာ ဆငျးခဲ့နိုငျပါတယျ။ ရတေံခှနျ ထိပျကနေ အောကျကိုဆငျးတဲ့ အဖှဲ့ဟာ ကြှနျတျောတို့ ပထမဆုံးအဖှဲ့ ဘဲလို့သိခဲ့ရလို့ အားတကျခဲ့မိပါတယျ။ (၂၂.၉.၂၀၁၇) နမှေ့ာ ဒုတိယအကွိမျအဖွဈ အဖှဲ့ဝငျ အငျအား ၇ ယောကျပါဝငျပွီး အောငျမွငျစှာ ဆငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယအကွိမျကတော့ အရမျးကနြေပျအားရခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ ၉ ယောကျ ပွငျဦးလှငျမှ မနကျ ၁၀ နာရီမှာ ကားနဲ့ထှကျခှာလာခဲ့ပွီး နလေ့ညျ ၁၂ နာရီ အကြျောမှာ သပွဒေိုးရှာ သို့ရောကျရှိပါတယျ။ သပွဒေိုးရှာမှာ ထမငျးစားနားခဲ့ကွပွီး နလေ့ညျ ၁ နာရီအကြျောမှာ သပွဒေိုးရှာမှ ထှကျခှာလာခဲ့ပွီး ၂ နာရီဝနျးကငျြးမှာ ရအေားလြှပျစဈ စီမံကိနျးသို့ရောကျရှိပါတယျ။ ထိုနရောသညျ အကောငျးဆုံး view တဈခုဘဲဖွဈပါတယျ။ တောငျစှယျ တောငျတနျးတှကွေားမှာ ဆညျတျောကွီးကနျရပွေငျကို အပျေါစီးကနေ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျပွီး မွငျနရေတဲ့မွငျကှငျးတှဟော ပနျးခြီကားခပျြကွီးအလား ထငျမှတျရလောကျအောငျ လှပပါတယျ။ အဝေးဆီက မိုးထိတောငျ ရဲ့အလှအပတှကေိုလညျး အတိုငျးသားတှနေ့ရေပွီး မိုးထိတောငျဆိုသညျ့အတိုငျး တောငျရဲ့အမွငျ့ဆုံးထိပျပိုငျးဟာ တိမျတှနေဲ့တဈဆကျထဲ ဖွဈနတော တှလေို့ကျရတော့ အရမျးအံ့ဩမှငျသကျစခေဲ့ပါတယျ။
ယခုနရောအထိက ကြောကျလမျးမ ဖွဈသညျ့အတှကျ ကား အဝငျအထှကျ အဆငျပွခေဲ့ပွီး ရအေားလြှပျစဈစီမံကိနျးမှ ရတေံခှနျ သို့သှားမယျ တဈမိုငျခှဲခနျ့သညျ လမျးအဆငျမပွတေဲ့အတှကျ ကားကို အနားက အိမျဆိုငျလေးမှာဘဲ အပျထားခဲ့ပွီး Trekking စတငျခဲ့ပါတယျ။ ညနေ ၃ နာရီဝနျးကငျြ မှာ ရတေံခှနျရဲ့ အပျေါဖကျ view ဆီသို့ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။
ရတေံခှနျကို မွငျလိုကျရတော့ မအံ့ဩဘဲကိုမနနေိုငျပါ။ ရအေရမျးမြားနပွေီး ရထားတဈစငျး ခုတျမောငျးနသေလား ထငျမှတျရလောကျအောငျ တဂြုံးဂြုံးအသံတှထှေကျပျေါနပွေီး ရတှေကေနြတော တှလေို့ကျရပါတယျ။ အောကျကိုငုံ့ကွညျ့လိုကျရငျ မူးသှားလောကျအောငျအထိ ခြောကျအနကျကွီးထဲ ရတှေထေိုးကနြပေါတယျ။ ခြောကျကမျးပါးယံက ဘာအကာအရံမှမရှိ လူတဈကိုယျစာ လေးဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဓာတျပုံ ရိုကျတဲ့သူမြား သတိ ကွီးကွီးထားပွီး ဂရုစိုကျစခေငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရတေံခှနျ ထိပျတညျ့တညျ့ ကရစေီးကွောငျးအထိ အနီးကပျ လလေ့ာခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
ရတေံခှနျ အောကျဖကျသို့ ဆငျးရနျ ပထမအကွိမျက ရတေံခှနျရဲ့မွောကျဖကျကနေ ဆငျးပွီး တောငျဖကျကနေ အပျေါကို ပွနျတကျခဲ့ပါတယျ။ မွောကျဖကျလမျးရဲ့ အနအေထားဟာ လမျးကွောရှညျလြားပွီး အန်တရာယျဖွဈစမေယျ့အနအေထားမြိုးတှေ သိပျမတှရေ့ဘဲ အဆငျပွခေဲ့ပါတယျ။ လမျးကွောဟာ အရမျး ရှညျလြားတဲ့အတှကျ အဆငျးမှာ ဘဲ အခြိနျ ၂ နာရီခှဲ ကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ။ တောငျဖကျကနေ ပွနျတကျတဲ့လမျးဟာ တိုတောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရမျးမတျစောကျပွီး အန်တရာယျ အလှနျကွီးမားပါတယျ။ ခြောကျနကျကွီးရဲ့ တောငျကမျးပါးယံတှထေကျမှာ လူတဈကိုယျစာလမျးလေးတှကေနေ ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ပွနျတကျခဲ့ရပါတယျ။
စှနျ့စားခရီးသှားရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ သှားသငျ့တဲ့ လမျးပါ။ ယခုတောငျဖကျလမျးက တောငျတကျ တောလမျး အတှအေ့ကွုံရှိပွီးသား လူတှအေတှကျဘဲ အဆငျပွမှောပါ။ ခွအေခမြတျောရငျ သကျတမျးနုနယျသေးတဲ့ ကြောကျတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကြောကျတှေ ပဲ့ကပြွီး လူပါခြောကျထဲပွုတျကသြှားနိုငျပါတယျ။
ယခု ဒုတိယအကွိမျမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ တောငျတကျလမျးတိုတောငျးတဲ့ ရတေံခှနျတောငျဖကျခွမျးကနဘေဲ အတကျအဆငျး ပွုလုပျခဲ့တာပါ။ ဆငျးတဲ့လူ ၇ နှဈယောကျလုံးက တောငျတကျအတှအေ့ကွုံတှရှေိထားပွီး လမျးကွောငျးအနအေထားတှေ နားလညျထားပွီးသား လူတှဖွေဈတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အတှကျတော့ သာသာယာယာပါဘဲ။ အခကျအခဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့ မိနျးကလေးမပါဘဲ ယောကျကြားလေးတှခေညျြးဘဲ ဖွဈတာနဲ့ ဇှဲလုံ့လ ဝရီယအားစိုကျထုတျပွီး အရမျးကွိုးစားခဲ့တာကွောငျ့ ရတေံခှနျထိပျကနေ အောကျဖကျသို့အဆငျးမှာ ကွာမွငျ့ခြိနျ ၄၈ မိနဈ ဘဲကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ။ အတကျလမျးကိုလညျး ယခုလမျးကိုဘဲ အသုံးပွုပွီး ပွနျတကျခဲ့ရာ ကွာမွငျ့ခြိနျ ၅၀ မီနဈ မှာ အပျေါသို့ ပွနျရောကျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ညနေ ၄ နာရီဝနျးကငျြမှာ ရတေံခှနျထိပျကနေ တောငျ စဆငျးခဲ့ပါတယျ။ ခြောကျကမျးပါးယံထကျက သကျတမျးနုနယျသေးတဲ့ ကြောကျနုလေးတှကေနငျးပွီး လူတဈကိုယျစာ ခွခေစြရာလမျးလေးတှကေနေ ဆငျးခဲ့ပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိရငျတော့ အတကျအဆငျးပွုလုပျဖို့ လုံးဝမလှယျကူပါ။
တောငျဆငျးလမျးမှာ သဘာဝကြောကျဂူမြား ကြောကျစကျမိုးမြှျောမြား ကြောကျစကျရမြေား အရမျးလှပတဲ့ ဆညျတျောကွီးကနျရပွေငျနဲ့ သဘာဝတရားဟာ အလှနျလှပပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရတေံခှနျအခွအေောကျတျောတျောနကျတဲ့အထိ ရောကျသှားခဲ့ပွီး အရဈရဈအထပျအထပျတှနေဲ့ တှလေို့ကျရတော့ ပငျပနျးသမြှအမောပွေ ခဲ့ရပါတယျ။ ရစေီးလညျး အရမျးသနျနပွေီး တဈဆငျ့နဲ့တဈဆငျ့ ပုံစံမတူ ကှဲပွားပွီး ရသမြိုးစုံ ပေးစှမျးပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ မှတျတမျးဓာတျပုံတှရေိုကျကွ အမှတျတရဓာတျပုံတှေ ရိုကျကွပွီး ရတေံခှနျ အပျေါဆငျ့ တှဆေီ တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ တကျခဲ့ပါတယျ။ ညနေ ၆ နာရီ တိတိ မှာ ရတေံခှနျ အောကျခွရေဲ့ အကောငျးဆုံး view တဈခုကို ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ ရုတျတရကျကွီး ကိုယျ့မကျြစိရှမှေ့ာ မွငျလိုကျရတဲ့ ရတေံခှနျမွငျကှငျးကွောငျ့ သတိလှတျသှားပွီး အသကုနျ အျောထညျ့လိုကျတာ လူပါခြျောကကြာ ဖုနျးပါကှဲသှားခဲ့တာ အမှတျတရတဈခုပါဘဲ။ တကယျကိုလှတာဗြာ ၊ ကိုယျ့ကိုယျတောငျ အိမျမကျမကျနသေလားတောငျ ထငျမှတျရပါတယျ။
ပထမအကွိမျဆငျးတုနျးက ယခုနရောကို မရောကျခဲ့ပါ။ အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ အလှဟာ အရမျးဆနျးကွယျလှနျးပါတယျ။ ဒီလောကျလှနတေဲ့ သဘာဝအလှတှနေဲ့ အနီးကပျထိတှခှေ့ငျ့ ရခဲ့တဲ့အတှကျ အရမျးကနြေပျခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ထိုနရောမှာ စတငျထှကျခှာပွီး တောငျပျေါသို့ပွနျတကျခြိနျမှာ မိုးခြုပျသှားခဲ့ပါပွီ။ အမှောငျထဲမှာ ဓာတျမီးတှထေိုးပွီး အထူးဂရုစိုကျ သတိ ကွီးစှာနဲ့ တောငျပွတျတကျခဲ့ရာ ည ၇ နာရီကြျောမှာ တောငျပျေါသို့ ပွနျရောကျပါတယျ။
ရတေံခှနျတောငျထိပျက view point နားမှာ နားကွ ညစာခေါကျဆှဲပွုတျစားကွ အနားယူပွီး ည ၈ နာရီ ဝနျးကငျြမှာ view point ကနေ ရအေားလြှပျစဈစီမံကိနျးအထိ trekking ပွနျစတငျခဲ့ပါတယျ။ အမှောငျထုဟာ ကွီးစိုးနပွေီး လြှပျစီးရောငျတှတေလကျလကျနဲ့ ကွယျတှထှေနျးလငျးတောကျပနတေဲ့ ညတဈည ပွောငျးဖူးခငျးတှကွေားမှာ သဘာဝရစေီးကွောငျးတှကေိုဖွတျပွီး အမှောငျထဲက လကျနတေဲ့ ဆညျတျောကွီးရပွေငျကို ငေးမောပွီး တောတှငျး လမျးလြှောကျခဲ့ရတဲ့ ညတဈညဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ အမှတျတရအဖွဈဆုံး ညတဈညပါဘဲ။ တိတျဆိတျငွိမျသကျနတေဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြမှာ လှတျလပျမူရဲ့ အရသာကို အပွညျ့အဝ ခံစားရတဲ့ စိတျခံစားမူဟာ ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရပါ။ ကြှနျတျောတို့ ည ၉ နာရီဝနျးကငျြမှာ ရအေားလြှပျစဈစီမံကိနျး ကားထားခဲ့တဲ့ နရောကို ရောကျရှိပါတယျ။ ထိုနရောမှာ ပွနျလညျ ထှကျခှာလာခဲ့ပွီး ည ၁၁ နာရီကြျောမှာ မမွေို့သို့ ပွနျလညျရောကျရှိပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့မှာ ရခေဲတောငျ တောငျတကျသမား ကိုမိုးမငျးသိနျး(ပူတာအို) / ပွငျဦးလှငျမွို့ ပိန်နဲကုနျးရှာ ဥက်ကဌ လေးလေး ဦးဇျောဝငျး / region conductor ကိုငွိမျးမောငျ / ခရီးသှားလမျးညှနျမှ ကိုရနျနိုငျမိုး / မမွေို့ ခရီးသှားလုပျငနျး တိုးတကျအောငျ ကွိုးစားနသေညျ့ ကိုကြျောဝဦေး / သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးလလေ့ာနသေညျ့ ကို အကွီးကောငျ / သဘာဝတရားကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ ကိုကြျောသူရထှနျး / စှနျ့စားခရီးသှား ဝါသနာရှငျ ကိုထူးထူးလငျး နှငျ့ သဘာဝရဲ့ဖွဈတညျမူတှကေို အထူးတနျဖိုးထားခဈြမွတျနိုးပွီး အနီးကပျလလေ့ာရှာဖှနေတေဲ့ ကြှနျတျော နထှေနျးဦးတို့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ တောအနအေထားသညျ မိုးအခါမှာ တောဆငျးရိုငျးတှရှေိတတျပါတယျ။ နှအေခါမှာ တောဝကျတှေ ရှိတတျပါတယျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ၃ ရကျက ဝံ တတျလာသညျဟု ဒသေခံတှဆေီက သိခဲ့ရပါတယျ။
ယခု ကြှနျတျောရေးခဲ့တာ လိုအပျခကျြ တဈခုလိုနမေယျဆိုတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ။ လိုအပျခကျြကို အကယျြတဝငျ့ ရှငျးပွရနျ ကြှနျတျောအခွခေံကကြ ထိနားလညျတတျကြှမျးထားမူ မရှိတဲ့အတှကျ ထိနျခနျြထားခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျော ရေးသားခကျြ အမှားအယှငျးတဈစုံတဈရာ ပါသှားမှာ စိုးထိတျမိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မရှငျးပွတော့ပါ။ အညိုရောငျနယျမွေ ဖွဈတယျလို့ ပွောပွရငျ လုံလောကျပါပွီ။ ဒီလောကျဆို သဘောပေါကျမယျထငျပါတယျ။
Posted in Knowledge, PlacesTagged myanmar places
Previous post ပစိဖ်ိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးအလယ်က မိသားစုကျွန်း
Next post ကျောက်တုံးကြီးပိနေတဲ့မြို့